ဟန်းဂုရွာ: မြန်မာစကားတွင်ပျောက်ကွယ်သွားလုပြီ ဖြစ်သည့် မွေးစားဝေါဟာရများ (အပိုင်း ၁)
မြန်မာစကားတွင်ပျောက်ကွယ်သွားလုပြီ ဖြစ်သည့် မွေးစားဝေါဟာရများ (အပိုင်း ၁)
ဘီရို/ဗီရိုကို Myanmar English Dictionary စာမျက်နှာ ၃၁၃ ၌ ပုံဖြင့် two wheeled bullock cart withawooden, box-like body. [Fr. Bureau] ဟုဖော်ပြထားသည်။ “ဘီရိုပေါ် မောင်နှံတင်၍ ဆောင်ရာအ ရှင် ဇာတာနွမ်းလို့ မြန်းရရှာလေပြီ” ဟု အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဆရာရွှေတိုင်ညွန့်ရေးစပ်ပြီး ဒေါ်စိန်ပါတီသီဆိုခဲ့ သည့် “ပါတော်မူ”သီချင်း၌လည်းပါပါသည်။ စာရေးသူအတွက်ဘဝင်မကျသည်မှာ အနောက်တိုင်းသား များသည် နွားဆွဲသောရထား/လှည်းများကိုစီးလေ့မရှိ၍ပင်ဖြစ်သည်။ French-English Dictionary ၌ bureau ကိုကြည့်ရာ bureau [byro] (pl bureaux) nom masculin [meuble -généralement] desk; [ – à rabat] bureau; bureau à cylindre roll-top desk; [pièce d’une maison] study; [lieu de travail] office စသောအနက်များသာပေးထားပါသည်။ သေတ္တာ၊ ရထား၊ လှည်း စသည်တို့နှင့် နီးစပ်သောအနက်စိုးစဉ်းမျှပြမထားပါ။ ပို၍သေချာစေရန် French – German Dictionary ကိုကြည့်ရာတွင်လည်း အလားတူအနက်ပင်ပေးထားပါသည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ် အင်္ဂလိပ် – ပြင် သစ် နှင့် ဂျာမန် – ပြင်သစ် အဘိဓာန်များ၌ှကြည့်ရာ သေတ္တာကို ပြင်သစ်လို boite, အမိုးမပါသော ရထားကို ပြင်သစ်လို calèche, ရထားလုံးကို ပြင်သစ်လို carosse, လှည်းကို ပြင်သစ်လို charette ဟုခေါ်ကြောင်းသာတွေ့ရပါသည်။ ဘီရို၊ ဘီိဒိုစသောအသံထွက် ဆင်တူရိုးမှားကိုသော်မျှ မတွေ့ရသဖြင့် Myanmar English Dictionary စာမျက်နှာ ၃၁၃ ၌ ပုံဖြင့် two wheeled bullock cart withawooden, box-like body. ဟုဖော်ပြထားသည့် ဘီရို/ဗီရိုလှည်း၏ မူရင်းဇာစ်မြစ်ဗီဇ (etymology) သည် ပြင်သစ်ဘာသာမှမဟုတ်ကြောင်း သေချာသွားပါသည်။ မြန်မာစာအဖွဲ့သည် နိုင်ငံခြားဘာသာသိပ္ပံရှိ ပြင် သစ်ဘာသာဌာနနှင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့လျှင်သော်၎င်း၊ သို့မဟုတ်ယခုစာရေးသူ လုပ်ခဲ့သည့်နည်း အ တိုင်း အင်္ဂလိပ် – ပြင်သစ်နှင့် ပြင်သစ် – အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်များ၌ကြည့်ခဲ့လျှင်သော်၎င်း ဤအမှားမျိုးနှင့် ကြုံရမည်မဟုတ်ပေ။ ဝေါဟာရ၏မူရင်းဇာစ်မြစ်ဗီဇ (etymology) ကို အဘိဓာန်၌ပေးရာတွင် ကြားဘူး နားဝဖြင့်မလုပ်သင့်ပါ။ အထပ်ထပ်အခါခါစစ်ဆးသင့်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စကား Governor ကို “ ဂေါ်ဝါနာ”ဟု အသံလှယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာလိုဘုရင်ခံဟု၎င်း ဘုရင်ခံမင်းကြီးဟု၎င်းဘာသာပြန်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် Lt. Governor ကို ဒုတိယဘုရင်ခံဟု၎င်း၊ ဒုတိ ယဘုရင်ခံမင်းကြီးဟု၎င်းဘာသာပြန်ကြပါသည်။